News Collection: 'भगवानले बचाए’
पूर्वयुवराज पारस शाहले पेस्तोल ताकेपछि शनिबार रातिदेखि बेहोस भएका परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुवेल चौधरी सोमबार बिहानसम्म पनि राम्ररी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । चितवनको टाइगरटप्समा पारसले ४ राउन्ड हवाई फायर गरेपछि उनलाई नवलपरासी ल्याई सुरक्षा दिइएको थियो । उनी आइतबार दिउँसो श्रीमती मेलानी कोइराला र छोरा ४ वर्षे मोहिमसहित नवलपरासीको दुम्कौलीस्थित चौधरी उद्योग ग्राममा थिए । चौधरी सोमबार दिउँसो चार्टर गरेर ल्याइएको हेलिकप्टर चढ्नुअघिसम्म पनि त्रसित देखिन्थे । हेलिकप्टर चढ्नु १० मिनेटअघि कान्तिपुरका नारायण शर्मासँग चौधरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-
टाइगरटप्समा तपाईं र पारस शाहबीच किन झगडा भयो ?
म र परिवार बाँच्न सफल भयौं । त्यो सम्झिँदा म अत्यन्त त्रसित छु । हेर्नुस् न -कामेका आफ्ना दुवै हात माथि उचाल्दै), म बोल्न सक्ने अवस्थामै छैन । खुदा -भगवान्) ले हामीलाई बचाए । भगवान्लाई धेरै-धेरै धन्यवाद । म उनलाई चिन्दा पनि चिन्दैनथें । मेरो उनीसँग कुनै सरोकार पनि थिएन । कुनै दुस्मनी पनि थिएन । उनीप्रति कुनै चासो पनि थिएन । म त परिवार र साथीसँग थिएँ । एक्कासि घटना भयो । हामी बाँच्न सफल भयौं ।
चिनजानै नभए पारस तपाईंमाथि किन जाइलागे ?
त्यस रात खाना खाने बेला भएको थियो । त्यसै क्रममा परिचय भयो । त्यसपछि उनले एकैचोटि कोइराला परिवारका कारण मोनार्की (राजतन्त्र) गयो भने । मैले चासो दिइनँ । उनी एकैछिन पछि इमोसनल भएर आए । अनि राजतन्त्र फाल्नुमा कोइराला परिवारको ठूलो हात छ भने । उनलाई हार्दिकतापूर्वक मैले यसमा मेरो केही दोष छैन भनें । मैले हात जोडेर भनें, म त विदेशी नागरिक हुँ । उनले एक्कासि आवेशमा आएर जंगलतिर घुम्न जाउँ भने । मैले परिवार र साथीसँग छु, माफ गर्नुहोला जान सक्दिनँ भनें । म कुनै मारामारी गर्ने मान्छे होइन । आदत पनि छैन । माफ गर्नु होला महोदय, कृपया तपाईं जानुहोस् भनें । उनले आवेशमा आएर पेस्तोल ताके....(आफ्नो वाक्य पूरा नगरी आत्तिँदै) परिवार र म बाँच्यौं यसैमा खुसी छु । म अरू केही बोल्न
चाहन्नँ । हामी बाँच्यौं...।
हतियार पारससँगै थियो कि कोसँग ?
उनले मलाई सोझै ताकेर त हानेनन् । नत्र....(बोल्दाबोल्दै रोकिए), फेरि सम्हालिएर -हातले आकाशतर्फ देखाउँदै) ३/४ राउन्ड हवाई फायर गरे । मेरो होस गुम भयो । केही थाहा छैन । म बोल्न पनि सक्दिनँ हेर्नुस् न ।
पारसका सुरक्षाकर्मीले केही गरेनन् ?
सबै त्रसित थिए । मलाई थाहै भएन । म त केही सोच्नै सक्दिनँ । उनीहरू पनि सायद...।
पारसविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउनु हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
भगवान्ले बचाए । मलाई केही भन्नु छैन । म परिवार र साथीसँग छुट्टी मनाउन आएको हो । अरू केही छैन । (सँगै रहेकी ३६ वर्षीया उनकी श्रीमती मेलानीले अंग्रेजीमा केही भन्न खोज्दा रुवेलले नबोल्न संकेत गरे ।) भयो अब धेरै नबोलौं, हामीलाई घर जान दिनुहोस् है